आज पनि घट्यो सुनको मूल्या, कति पुग्यो ? - आज पनि घट्यो सुनको मूल्या, कति पुग्यो ? -
आज पनि घट्यो सुनको मूल्या, कति पुग्यो ?
उज्यालो प्रतिनिधि २७ पुष २०७७, सोमबार अर्थ
काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज पनि पहेंलो धातु सुनको मूल्य घटेको छ । छापावाला सुन आइतबार प्रतितोला २३ सय रूपैयाँले घटेकोमा आज पनि ८०० रूपैयाँले घटेको हो । आइतबार ९३ हजार रूपैयाँमा कारोबार भएको सुन आज प्रतितोला ९२ हजार २०० रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
यस्तै तेजाबी सुन आज प्रतितोला ९१ हजार ७०० रूपैयाँमा कारोवार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ ।
त्यस्तै, आज चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ । आज चाँदी प्रतितोला ४० रूपैयाँले घटेर एक हजार २३० रूपैयाँमा कारोवार भइरहेको छ ।